Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » HotelApp - App an'ny mpitsidika tsy misy Touch vaovao avy amin'ny International Travel Awards
Ny International Travel Awards dia nanangana HotelApp - finday tsy misy fifandraisana ho an'ny Hotel izay iaraha-miasa amin'ny KSA Software Technology, orinasa teknolojia lozisialy malaza, QR Code App for Hotel izay mamela ny vahiny hamandrika sy hiditra amin'ny fotodrafitrasa mandritra ny fijanonany ao amin'ny hotely.
Ny fandinihana ny toe-javatra mahatsiravina dia mety amin'ny trano fandraisam-bahiny HotelApp. Eny, miaraka amin'ny famandrihana isam-bolana tsotra dia manomboka amin'ny GBP 69 ary TSY MISY fampiasam-bola lehibe takiana.
Ny App Hotel dia tsy mitaky fametrahana, ary ny hotely dia afaka mahazo tsikera amin'ny fotoana tena izy amin'ny tsindrio bokotra iray. Tsy ny ekipan'ny hotely ihany no afaka mitantana ny fangatahana rehetra, ny fitarainana avy amin'ny vahiny avy hatrany amin'ny console.
HotelApp dia manome fitaovana amin'ny fifandraisana farany eo amin'ny hotely sy ny vahininy. Ny fampiharana dia ahafahana manohana ny mpanjifa tsara kokoa ary manatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny farany. Io dia ahafahan'ny mpandraharaha hitrandraka trano hitrandraka ny angon-drakitra sy ny hevitr'izy ireo hanatsarana ny fotodrafitrasa sy serivisin'izy ireo.
HotelApp dia mikendry ny hanolotra trano fandraisam-bahiny hanana fotoana hanovana ny mpanjifany manontolo. Ny mpitantana hotely dia afaka mitantana ny hotely misy azy ireo ary mandefa izay fampiroboroboana sy hetsika atao amin'ny tsindry roa.
Ny HotelApp dia mamela ny vahiny Hotel hiditra amin'ny serivisy rehetra atolotry ny hotely amin'ny alàlan'ny findainy. Mangataka fotsiny ny mpanjifa mba hanara-maso kaody QR ary hiditra ny kaody tokana misy azy ireo hiditra amin'ireo fotodrafitrasa, hangataka serivisy mifandraika amin'ny fampitaovana, Travel, Stay related ary maro hafa. Ity App Service Guest ity dia manohana serivisy efa niorina maherin'ny 1000 izay manampy anao hanomboka eo noho eo nefa tsy mandany fotoana be loatra amin'ny fampidirana data miaraka aminao. Afaka mampiakatra ny fangatahana serivisy amin'ny alàlan'ny fampiharana ny mpanjifa, ary ny fitantanana hotely dia afaka manara-maso sy miresaka izany amin'ny fotoana tena izy.
Ity fampiharana serivisy ho an'ny efitrano ity dia mitondra miaraka aminy ny ho avin'ny menus sy ny fisakafoanana! Ny endri-javatra Touchless fisakafoanana dia ahafahan'ny mpampiasa mametraka sakafo amin'ny trano fisakafoanana nefa tsy mampiasa menio ara-batana. Ity endri-javatra ity dia manome safidy toy ny vidiny mavitrika, menus namboarina, manasongadina lovia manokana sy sonia, ary safidin'ny menio notarafina.
Endri-javatra iray hafa natolotry ity App for Hotel ity ny Digital Spa Menu. Ity fampiasa ity dia ahafahan'ny mpitsidika trano fandraisam-bahiny manoratra serivisy spa maro isan-karazany atolotry ny hotely amin'ny sehatra an-tserasera. Ity fampiasa ity dia ahafahan'ny trano fandraisam-bahiny manomana tsara sy mitantana ny fandaharam-potoanan'ny mpiasa hahazoana fahafaham-po ny mpanjifa mahomby. Ny fampiharana dia mamela ihany koa ny menio spa nomerika izay manohana fonosana spaoro namboarina, fanomezana sary spa, ary fampiroboroboana. Izany dia hisarika ny mpanjifa amin'ny fifanarahana mahasarika ary hampitombo ny famandrihana sy fidiram-bola.
HotelApp dia manohana ihany koa ny safidy hanosehana ny fampiroboroboana isan-karazany sy ny tolotra ho an'ireo vahinin'ny hotely. Manampy amin'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny haino aman-jery sosialy ity fampiasa ity ary ahafahana mampita hafatra amin'ny vahiny vahinin-trano, mampitombo ny vola azo sy mahazo vola.
Ny trano fandraisam-bahiny dia afaka manamboatra ny rindranasa mifototra amin'ny zavatra ilainy sy takiny. Ny safidy ho an'ny fanamboarana dia ahafahan'ny hotely misafidy endri-javatra izay mifanaraka amin'ny herin'izy ireo. Te-hanolotra traikefa iray indray mandeha amin'ny fiainana ianao ho an'ireo vahininao? raha eny dia mifandraisa amin'ny ekipa HotelApp ao amin'ny https://hotelappsoftware.com